Saturday,15 August, 2020 | ३१ साउन २०७७
विकाश पराजुली बुटवल, १७ असार
भैरहवाका आशा गुरुङलाई ब्रिटिस आर्मी बन्न परिवारबाट दबाब थियो बाजे, बुबा र २ जना काका ब्रिटिस आर्मी भएकै कारण आमाको पनि यूकेको ग्रीन कार्ड छ ।
परिवार र नातागोता ब्रिटिस आर्मीमा भएका कारण परिवारमा आशालाई आर्मी बन्न दबाब भए पनि आशा आर्मी बन्न सकेनन् । हजुरबुबा र बुबा बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएकाले उनलाई पनि भर्ती गराउने परिवारको धोको त्यसबेला ब्रेक लाग्यो, जब आशा दाँतमा कीरा लागेको भन्दै भर्ती हुन आएनन् । त्यसपछि बेलायती सेनामा भर्ती हुने बाटो बदले गुरुङले ।
आशाका परिवार बेलायतमै बस्छन् । उनी भने श्रीमती र दुई छोरासहित रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका- ३ का आसलाग्दा कृषकका रूपमा उदाउँदै छन् ।
जर्मनीमा करिब ३ वर्ष कृषि फार्ममै काम गरेपछि आशा नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएपछि ५ वर्ष रेष्टुरेन्ट व्यवसाय गरे । ७ वर्ष भैरहवामै नर्सरी व्यवसाय सञ्चालन गरे । नर्सरी व्यवसायपछि आशाले १० वर्ष रियल स्टेट व्यवसाय गरे ।
विदेशमा कृषिको अनुभव, होटल, नर्सरी र घरजग्गाको व्यवसाय गरेपछि आशाले केही नयाँ काम गर्ने योजना बनाए । ठूलो लगानीमा नमुना कृषि फार्म सुरु गर्ने योजनाका साथ उनले डेढ वर्षदेखि रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका– ११, भुजौलीमा लुम्बिनी अर्ग्यानिक कृषि फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेका छन् ।
भुजौलीको पक्लिहवा हाईस्कुलको जग्गा वर्षौंदेखि बाँझै थियो । आशाले भैरहवादेखि पश्चिम भुजौली गाउँमा रहेको विद्यालयको सात विगाह जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिए । त्यही जग्गालाई ३ वटा ब्लकमा विभाजन गरेर तरकारी, फलफूल उत्पादन सुरु गरेका छन् ।
ए ब्लकमा आशाले ३ विगाह क्षेत्रफलमा फलफूल खेती गरेका छन् । ५ हजार बिरुवा २८ किसिमका फलफूल ए ब्लकमा लगाएका छन् । चिसो भेगमा फल्ने स्याउदेखि गर्मी ठाउँमा फल्ने लिचीसहित दशहरी, कपुरी, लङ्गडा र चौँसा गरी चारवटा प्रजातिका साढे ६ सय आँप, अनार, कागती, सुन्तला, मुन्तला, चेरी, कटहर, सलिफा, नासपाती, सिडलेस लिची, चेरी, ग्लोबेरी, मलबेरी, रसबेरी, एभोकाडो, डुरेन्डलगायतका फलफूल उनको नर्सरीमा छन् ।
४५ डिग्री तापक्रमको गर्मी हुने तराईमा कसरी फल्न सक्छ स्याउ ? आशा भन्छन्, ‘अस्ट्रेलियन प्रजातिको नानो स्याउ हो । कलमी गरेर रोपेका कारण जोखिमले यो फलफूलको बिरुवा लगाएको हुँ । जाेखिम माेलेरै पनि राेपेकाे हुनाले अहिले फल्न थालेकाे छ ।’
आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मल्टी फार्मिङ गरेका गुरुङले अस्ट्रेलियन जातको नानो स्याउका ५ सय ५० बिरुवा लगाएका छन् । नानो स्याउमा यस वर्षदेखि फल लाग्न सुरु गरेको छ । पहिलो पटक नर्सरीमा ८ वटा स्याउ फलेको उनले बताए । स्याउको स्वाद हिमाली स्याउभन्दा कम नभएको आशा बताउँछन् ।
सोही क्षेत्रमै बी ब्लक बनाएका आशाले डेढ विघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती लगाएका छन् । गोभी, ब्रोकाउली, खुर्सानी, टमाटर, साग, करेलो, लसुन, प्याज, भिन्डीलगायतका तरकारी उनले बी ब्लकमा लगाएका छन् ।
२ विगाह क्षेत्रमा माछा, हाँस, कुखुरा र बाख्रापालन गर्ने तयारीमा छन् उनी । कुखुरा र बाख्रापालन गर्ने फार्मको वरपर २ हजार केरा र २ हजार मेवाका बिरुवा रोप्ने योजना आशाले बनाएका छन् ।
५ वर्षभित्रमा फुलफूल, तरकारी तथा माछा, हाँस, कुखुरा र बाख्रा पालनमा ५ करोडको लगानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको फार्ममा अहिले साढे २ करोड लगानी भइसकेको छ । अझै टनेल निर्माण, खोर निर्माण र पोखरी निर्माणको काम बाँकी छ ।
पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारबाट १२ लाख ५० हजार र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट २ लाख ५० हजार अनुदान सहयोग पाएको फार्ममा प्रत्येक बोटमा पानी पुग्ने गरी पाइप बिछ्याएर सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ ।
आशासँगै फार्ममा रामप्रसाद खनालको पनि लगानी छ । आशाको ८० र रामप्रसादको २० प्रतिशत लगानी छ । फार्मको नेतृत्व, व्यवस्थापन र रेखदेख आशाले नै गरेका छन् । फार्ममा हाल ८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
तारे होटल सुरु गर्दै आशा
जर्मनीको हेम्बर्गमा ३ वर्ष रोजगारी गरेर फर्किएका आशासँग रेष्टुरेन्ट सञ्चालनकाे राम्रो अनुभव छ । कृषि कर्मबाटै केही नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर कृषिमा लगानी गरेका आशाले लगानी फेरि हाेटल क्षेत्रमा पनि गर्दै छन् ।
उनले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ मा फोर स्टार होटल सुरु गर्न लागेका छन् । १० कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको फोर स्टार होटलमा ५२ वटा कोठा छन् । लकडाउनका कारण फिनिसिङको काम मात्र बाँकी रहेको बताउने आशाले कृषि र पर्यटन व्यवसायलाई सँगै लैजाने योजनाका साथ लगानी गरेको बताउँछन् ।
कति हुन्छ कारोबार ?
फार्ममा ५ करोड लगानी गर्ने गरी योजना बनाएका आशाले डेढ वर्षअघि मात्र फार्म सुरु भएका कारण अपेक्षाकृत रूपमा कारोबार हुन सकेको छैन ।
तरकारी उत्पादनको सुरुवाती चरणमा मासिक ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएको आशा बताउँछन् । त्यसपछि भने मासिक १ लाख मात्र कारोबार भएको उनको भनाइ छ । लकडाउनमा भने तरकारी कम बिक्री भएको आशा बताउँछन् ।
अर्ग्यानिक तरकारी महँगो भनेर ग्राहकहरूले कम खरिद गरेको उनको भनाइ छ । डेढ वर्षको अवधिमा औसतमा जम्मा १५ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएको उनले बताए । फलफूलका बिरुवाले अब आउने वर्षदेखि मात्र पूर्ण रूपमा फल दिने भएकाले आउने वर्षबाट भने कारोबारमा वृद्धि हुने उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, १७ असार २०७७, ०८:१८:००
जनप्रतिनिधिले वास्ता गर्न छाडेपछि संस्थासँग सहयोग माग्दै आइसोलेसनका संक्रमित
लकडाउनपछि सुनसान बुटवल (फोटो फिचर)